Batocera: nidaamka qalliinka ee dib-u-baarista | Qalabka bilaashka ah
Batocera: nidaamka qalliinka ee dib-u-baarista
Waxaa jira taageerayaal aad iyo aad u tiro badan oo dib-u-habeyn ah, taas oo ah, dhammaan kuwa dib u dhaca ama cinwaannada fiidiyowga ee fiidiyowga ah ee aan waligood ka bixin qaabka. Sidaa darteed, horumariyayaal aad iyo aad u tiro badan ayaa sidoo kale abuuraya mashaariic si loo daboolo baahiyaha adeegsadayaashan xiisaha badan. Tusaale mashaariicdani waa si sax ah batocera, nidaamka qalliinka ee aan kuugu soo bandhigi doono qodobkaan.
Maqaallada kale waxaan horay uga faalloonnay waxyaabo ku saabsan mowduucan aadka u xiisaha badan, sida kiiska emulators ugu fiican taas oo u jirta guddiga loo yaqaan 'Raspberry Pi' si loo abuuro mashiinkaaga arcade ee raqiiska ah, ama aalado kale iyo qaybo kale oo aad u adeegsan karto ilaaliye ahaan (joystick) ama kontaroolada noocan ah mashiinada arcade caadi ahaan arcadadii 80-naadkii iyo 90-maadkii. Haddii aad xiisaynayso mawduuca, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhrinta tan iyo qodobbada kale si aad wax badan uga barato ...
1 Waa maxay Batocera?
2 Hel Batocera.linux
3 U hoggaansanaanta
4 Ku dar ciyaaraha fiidiyowga Batocera
Waa maxay Batocera?
Hagaag, sidaan horayba u soo sheegay, waa nidaam hawlgal. Mashruuca batocera waxay hirgelisay OS dhammaystiran iyadoo la adeegsanayo Linux saldhig ahaan, sida mashaariic kale oo badan oo la mid ah. Sidaa darteed, waa mashruuc bilaash ah oo furan.
Mashruucani waa takhasusay dib-u-samaynta, oo waa la heli karaa iyada oo gebi ahaanba bilaash ah kombiyuutarkaaga ama guddigaaga Raspberry Pi, iyo sidoo kale looxyada kale ee SBC sida Odroid, iwm. Xaaladda haysashada PC, LiveUSB ayaa loo isticmaali karaa sidaa darteed uma baahnid inaad wax ka beddesho qaybsanaanta ama nidaamka hawlgalka hadda jira. Taasi waa, waxaad si fudud u isticmaashaa pendrive oo leh Batocera si aad u bilowdo waxna uma baahna in la rakibo.
Xitaa sidoo kale waad ku rakibi kartaa kombiyuutarada gaboobay oo leh 32-bit x86 chips, iyo sidoo kale Intel NUC, Apple Mac, iyo xitaa sanduuqa Android sida Amlogic.
para hel Batocera, waad ku soo dagsan kartaa bilaash ka socota bogga mashruuca. Intaas waxaa sii dheer, meeshaas waxaad sidoo kale kaheli doontaa bulshadaada badan ee diyaar u ah inay ku caawiyaan, iyo waliba dukumiintiyo kaa caawinaya haddii aad su'aalo qabtid.
Hadaad rabto inaad u isticmaasho SBC, like Raspberry PiKaliya waa inaad kala soo baxdid xirmada la isku qurxiyey sawirka nidaamka hawlgalka, kala fur, ka dibna isticmaal sawirka la yiri si aad ugu kaydiso kaarka SD ee aad markaa ka soo dhejin doontid Motherboard kaaga Wixii macluumaad dheeraad ah, waad awoodaa eeg maqaalka NOOBS qeybta Ku rakib NOOBS oo raac isla talaabooyinka Batocera.
Ikhtiyaar kale haddii aad rabto inaad u sameysato kaar SD ah Batocera-diyaar u ah Pi-gaaga, waa inaad isticmaasho kuwa caanka ah Mashruuca Etcher taasoo aan horay uga hadalnay HwLibre. Waxaad arki kartaa dhammaan macluumaadka, iyo tillaabooyinka aad raacayso maqaalka aan daabacno...
Halkii, haddii aad rabto u samee USB kumbuyuutar PC ah, markaa waa inaad raacdaa isla talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad u abuurto bendrive bootable oo leh nidaam kale oo hawlgal. Waxaad ku sameyn kartaa tiro badan oo qalab ah adoo raacaya talaabooyinkan fudud:
Soo dejiso xirmada Batocera.
Feeji faylka la soo dejiyey si aad uga soo saarto sawirka IMG-ka OS-ga.
Hadda rakibi oo socodsiiso mid ka mid ah barnaamijyada loo doortay hawsha. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwa badan ee jira, sida Aetbootin (Windows, Linux, macOS) Rufus (Windows, Linux), Yumi (Windows, Linux), Etcher (Windows, macOS, Linux), iwm.
U adeegso barnaamijkan si aad u doorato pendrive-ka la geliyay PC-ga meesha aad rabto inaad ku rakibto nidaamka iyo sawirka Batocera si aad u rakibto.
Raac saaxir barnaamijka waadna dhamaysay.
Hadda waxaad dib u bilaabi kartaa kombiyuutarka, geli pendrive.
Gali BIOS / UEFI si aad u bedesho mudnaanta bootka oo aad USB u dhigto aasaasiga. Ka bax oo keydso isbeddelada.
Waa inay hadda la gasho Batocera halkii aad ka heli lahayd OS-gaaga caadiga ah.
Waad adeegsan kartaa oo aad ku samayn kartaa wax alla wixii aad rabto. Iyo inaad kusoo laabato nidaamkaaga qalliinka caadiga ah waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dib u bilowdo oo aad ka saarto USB-ga si ay dib ugu soo kabato nidaamkaaga ...
Marka ay bilaabato, laga bilaabo menu-ka Batocera (riix furaha Space) waxaad ku geli kartaa qaabeynta u beddel luqadda Isbaanish oo sidaas oo ay noqon doontaa oo dhan ka badan dareen leh.
Haddii aad ka yaaban tahay waafaqsanaanta ciyaaraha retro ee Batocera aqbalo, runta ayaa ah inay leedahay maktabado ku filan si aad ugu ciyaari karto tiro aad u tiro badan kulan video madal taasi waxay ahaayeen khuraafaad wakhtigaas taariikhda. Sidaa darteed, waxaad ka ciyaari kartaa tiro badan oo cinwaano ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah, waad arki kartaa tan liiska qaar ka mid ah barnaamijyada la taageeray:
Nintendo 3DS, Game Boy, GameCube, Game Boy Advance, Game Boy Color, 64, DS, Nidaamka Madadaalada, SNES, Wii
Sega Dreamcast, Nidaamka Master, Megadrive, Naomi, Saturn, 32x, CD, SG1000
Neo-Geo, CD, Jeebka, Midabka jeebka
Wixii macluumaad dheeraad ah - Batocera waafaqid
Ku dar ciyaaraha fiidiyowga Batocera
Haddii aad rabto ku dar ciyaaraha fiidiyowga BatoceraWaad raaci kartaa talaabooyinkan fudud si aad ugu darto cinwaannada aad rabto inaad ciyaarto, haddii ay la jaan qaadayaan astaamaha aan soo sheegnay.
Tan koowaad waa ka hel degel aad kala soo baxdo ciyaaraha Maxaad rabtaa. Wax badan ayaa jira degellada bixiya ROM-yada duug ah, xitaa gudaha Internet Archive waxaad heli kartaa qaar duug ah. Markaad heysato ROM-ka, tillaabooyinka loogu daro Batocera sidoo kale way fududahay, laakiin waxaad ku sameyn kartaa dhowr siyaabood.
Mid ka mid ah ka fudud Waa sida soo socota:
Waxaan Batocera ku shubnaa kombiyuutarkeena.
Riix furaha Space-ka oo tag nidaamka 'Config menu'
Hadda tag aaladda Kaydinta.
Xullo darawalka adag ee kombiyuutarkaaga martida ah halkaas, haddii aad ka sameyneyso kombuyuutarka. Haddii kale, waa inaad isticmaashaa xulashooyin kale si aad uga gudubto ROM-yada shabakad la wadaago, iwm.
Darawalka adag ayaa ah halkaad ubaahan lahayd inaad kala soo baxdo ROM-yada ciyaaraha fiidiyoowga ah ee aad rabto.
Hadda garaac Back, ka dibna reboot nidaamka.
Waa inuu hadda jiraa galka loo yaqaan "recalbox" oo ku yaal darawalkaaga adag. Taasi waa meesha aad xoqin karto, nuqul ka samayn karto BIOS, ROM-yada, iwm. Si fudud waa inaad uga nuqulsataa feylasha ROM-yada aan la furin faylkaas nidaamka qalliinkaaga caadiga ah.
Markaad haysato, dib u bilaw nidaamka oo kabaha ka soo qaado USB-ga Batocera. Oo waa inaad awood u yeelatid inaad ciyaarto ciyaarta la shubay illaa hadda.
Sidaad aragtay, waxay lamid tahay sidii loo samayn lahaa loogu talagalay Recalbox, sababtuna waxay tahay in Batocera uu ku saleysan yahay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Raspberry Pi » Batocera: nidaamka qalliinka ee dib-u-baarista
RecalBox: barnaamijka ugu dambeeya ee ciyaaraha gadaal
Nest thermostat: Qalabka guriga ee casriga ah ee Google